ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဝေးဆုံးပစ်မှတ်(၄.၃၄၉ မိုင်) အကွာအဝေးကို ကောင်းစွာ ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသော စနိုက်ပါရိုင်ဖယ် အသစ်ကို ရုရှား တီထွင် ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီ – Shwe Likes
Shwe | July 1, 2020 | International News | No Comments
ရုရှားနိုင်ငံ Lobaev Arms ကုမ္ပဏီရဲ့ SVLK-14 Sumrak စနိုက်ပါရိုင်ဖယ် တွေဟာ ယခင်ကတည်းက အလွန်ဝေးကွာတဲ့ ပစ်မှတ်ကို ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက် လူသိများ ကျော်ကြားခဲ့ ပါတယ် ။
SVLK-14 Sumrak စနိုက်ပါရိုင်ဖယ်
ယခုအခါ SVLK-14 Sumrak အမျိုးအစား စနိုက်ပါ ရိုင်ဖယ် ဆီးရီးစ် တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ DXL-5 ကို ဇွန်လ အစော ပိုင်းက စတင် ထုတ်ပြလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ DXL-5 ဟုအမည်တပ် ထားသော တီထွင်မှုသည် စစ်ဆင်ရေးတစ်ခု တွင်ရပ်နေသော သေနတ်သမား၏ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းလိုင်းထက် ကျော်လွန် ၍ ရန်သူ အားဖျက်ဆီးရန် တစ်ခုတည်းသော လက်နက်ဖြစ်သည် ။
DXL-5 စနိုက်ပါရိုင်ဖယ် ဟာ ၇ကီလိုမီတာ (၄.၃၄၉ မိုင်) အကွာအဝေးက ပစ်မှတ်ကို ကောင်းစွာ ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ အတွက် ကမ္ဘာမှာ အဝေးဆုံးက ပစ်မှတ်ကို ပစ်ခတ် နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ စနိုက်ပါရိုင်ဖယ်အသစ် ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော် ပွိုင့်ဖိုက်ကျည်ဆံနှင့် .408 CheyTac ကျည်ဆံ size နှိုင်းယှဉ်ပြထားပုံ။
DXL-5 စနိုက်ပါရိုင်ဖယ်အတွက် ကျည်ဆံကို 408 CheyTac (10.3×77 mm) အသုံးပြုထားပြီး ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ ကျည်ဆံရဲ့ မြန်နှုန်းဟာ အသံရဲ့ မြန်နှုန်း ထက် ၅ဆမက ရှိတာကြောင့် ဟိုက်ပါဆိုးနစ် ကျည်ဆံလို့ ဆ်ိုနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း သ်ိရပါတယ်ဗျာ။
JUN 30, 2020NIKOLAI LITOVKIN
Here, in early June 2020, production began on the world’s first sniper rifle able to hit targets atadistance of 6-7 km (the current record of 4.217 km also belongs to the Lobaev Arms company with its SVLK-14 Sumrak rifle). The development, designated DXL-5, will be the only weapon allowing operatives to destroy an enemy beyond the horizon line ofastanding shooter.
The Sumrak was built for .408 CheyTac cartridges (10.3×77 mm), which exit the barrel ataspeed of over 900 m/s. Moreover,anew type of powder-charge ammunition is being developed for the DXL-5, which will enable the bullet to fly at five or more times the speed of sound (greater than 1,500 m/s).
အမေရိကန်မှာ သေနတ်ရောင်းတဲ့ စတိုးဆိုင်ကို လုယက် ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားတဲ့ လူတွေရဲ့ အဖြစ်
အရူးကွက် ပေါင်းစုံ နင်းနေ တဲ့ စီလုတ်ကြီး ( သို့ ) အနုတ် လက္ခဏာ ပြနေပြီလား ရှီနဂါး
နှစ်နိုင်ငံပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အိန္ဒိယ-တရုတ်နယ်စပ်ဒေသ သို့ ရုတ်တရက် ရောက်လာခဲ့တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် မိုဒီ နှင့် အိန္ဒိယစစ်ဘက်အရာရှိကြီးများ